शीर्षकमा बाइबल पदहरू: प्रतिभा -> थप
हामी उहाँका सृष्‍टि हौं। हाम्रा जीवनबाट असल काम होस् भनेर नै उहाँले हामीलाई ख्रीष्‍ट येशूमा सृष्‍टि गर्नुभयो। हामीहरूले ती असल कामहरू गरौं भनेर उहाँले पहिले नै तयार गर्नुभयो।
“तिमीहरूमध्‍ये भएका सबै सिपालु कारिगरहरू आएर परमप्रभुले आज्ञा गरेका सबै कुराहरू बनाउनुपर्छ:
हरेक उत्तम र सिद्ध दान माथिबाट आउँछ। आकाश मण्‍डलमा ज्‍योतिहरू सृजना गर्नुहुने परमेश्‍वरबाट यी दान आउँछन्। उहाँ कहिले फेरिनुहुन्‍न, उहाँ नता बदलिने छायाजस्‍तो हुनुहुन्‍छ।
मलाई एउटा असल कर्मचारी देखाइदेओ र म तिमीलाई साधारण मानिसहरूभन्दा असल राजाहरूका सेवा गर्ने लायक मानिस देखाइदिनेछु।
 हे यहूदा र यरूशलेमका मानिसहरू हो, परमप्रभुसँग बाँधेको करारको चिन्‍ह अथवा खतना फेरि लगाओ तर यो चिन्‍ह हृदयमा लगाओ। होइन भने त तिमीहरूका दुष्‍कर्महरूले गर्दा मेरो क्रोध आगोझैँ दन्‍कनेछ र कसैले त्‍यसलाई निभाउन सक्‍नेछैन।” सारा देशमा तुरही बजाओ! स्‍पष्‍ट र चर्को सोरले कराओ! यहूदाका र यरूशलेमका मानिसहरूलाई, “पर्खाल लाएका सहरमा भागेर जाओ,” भन।
१ कोरिन्थी १२:५-६
 धेरै किसिमले सेवा चाहिँन्‍छ तर मालिकचाहिँ एउटै हुनुहुन्‍छ। धेरै किसिमका ईश्‍वरीय योग्‍यताहरू छन् तर हरेकलाई यी सब दिने परमेश्‍वरचाहिँ एउटै हुनुहुन्‍छ।
१ पत्रुस ४:१०-११
 परमेश्‍वरको अनुग्रहमा हरेकले किसिम-किसिमका वरदानको जिम्‍मा पाएका छन्। आफूले पाएको विशेष वरदान अरूको भलाइको लागि चलाओ। बोल्‍ने वरदान पाउनेले परमेश्‍वरको वचन बोलोस्, सेवा गर्नेले परमेश्‍वरको शक्तिले सेवा गरोस्। त्‍यसरी येशू ख्रीष्‍टमा सबै कुराबाट परमेश्‍वरकै महिमा होस्। सधैँभरि उहाँकै शक्ति र महिमा होस्! आमेन।
 त्‍यसलाई मेरो आत्‍माले भरेको छु। मैले त्‍यसलाई समझशक्ति, ज्ञान-बुद्धि र सबै प्रकारका कारिगरको काम गर्ने योग्‍यता दिएको छु। त्‍यसलाई सुन, चाँदी र काँसाको शिल्‍प-कलाको लागि, हीरा काट्‍ने र जड्‍ने, काठको चित्र कप्‍ने र अरू हरेक प्रकारको कलाको काम गर्ने सीप दिएको छु।
 “तिमीहरूचाहिँ संसारका ज्‍योति हौ। डाँडामाथि बसालिएको सहर त लुक्‍न सक्‍दैन अनि कसैले पनि बत्ती बालेर पाथीले छोप्‍दैन। बरु घरभरि उज्‍यालो होस् भनेर बत्तीचाहिँ अग्‍लो ठाउँमा राखिन्‍छ। त्‍यसरी नै तिमीहरूको उज्‍यालो पनि अरू मानिसहरूको अगाडि चम्‍कोस् अनि अरूहरूले तिमीहरूले गरेका राम्रा काम देख्‍नेछन् र स्‍वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका परमेश्‍वर पिताको महिमा गर्नेछन्।
 येशूले अझै भन्‍दै जानुभयो, “धर्म-कर्म गर्दाखेरि होश राख। यी काम मानिसहरूले देखून् भनेर नगर। नत्रभने तिमीहरूले स्‍वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको परमेश्‍वर पिताबाट केही पनि इनाम पाउनेछैनौ। “जस्‍तै, तिमीले कसैलाई केही दिँदा झ्‍याली नपिट। यस्‍तो त कपटीहरूले पो मानिसबाट प्रशंसा पाउन सभाघर र बाटाहुँदो गर्छन्। साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍छु, तिनीहरूले पाउनुपर्ने जति आफ्‍नो इनाम पाइसकेका हुन्‍छन्। त्‍यसैले कसैलाई दिँदा तिम्रो दाहिने हातले दिएको देब्रे हातले समेत थाहा नपाओस्। दिँदा सुटुक्‍क देओ अनि सुटुक्‍क दिँदा देख्‍नुहुने परमेश्‍वर पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ।
 परमेश्‍वरले मलाई अनुग्रह देखाउनुभएकोले म तिमीहरू सबैलाई भन्‍दै छु, आफूलाई ठूलो नठान तर परमेश्‍वरले दिनुभएको विश्‍वासको मात्राअनुसार आफू जस्‍ता छौ, त्‍यस्‍तै ठान। हाम्रो शरीरमा धेरै अङ्गहरू भए पनि ती अङ्गहरूका बेग्‍लाबेग्‍लै काम छन्। त्‍यसै गरी हामी धेरै भए पनि ख्रीष्‍टमा एउटै शरीर हौं र हामी सबै एक-अर्काका अङ्ग हौं। यसकारण परमेश्‍वरले आफ्‍नो अनुग्रहले हामीलाई दिनुभएका बेग्‍लाबेग्‍लै दानअनुसार उहाँका कामहरू गरौं। परमेश्‍वरको तर्फबाट बोल्‍न सक्‍नेले आफ्‍नो विश्‍वासअनुसार उहाँकै तर्फबाट बोलौं। सेवा गर्नेजतिले ठीकसँग सेवा गरौं, परमेश्‍वरका शिक्षा दिन सक्‍नेले आफ्‍नो विश्‍वासको मात्राअनुसार शिक्षा देओस्। ठीक बाटोमा हिंड्‍न सल्‍लाह दिन सक्‍नेले सल्‍लाह देओस्। खाँचोमा परेकालाई दिनेले खुल्‍ला मनले देओस्। काम मिलाउनेले सक्‍दो चाँडै मिलाइहालोस् र दया देखाउनेले खुसीसाथ दया देखाओस्।
१ कोरिन्थी १२:१-११
 अब दाजुभाइ हो, पवित्र आत्‍माका वरदानको बारेमा तिमीहरूलाई साँचो कुरा बुझाउन चाहन्‍छु। तिमीहरूलाई थाहै छ, प्रभुमा विश्‍वास नगर्दा तिमीहरू कुनै न कुनै किसिमले बोल्‍दै नबोल्‍ने मूर्तिहरू मान्‍थ्‍यौ। परमेश्‍वरको आत्‍मामा चल्‍ने मानिस कसैले पनि “येशूलाई धिक्‍कार!” भन्‍दैन अनि पवित्र आत्‍माले भन्‍न नलाउनुभएसम्‍म कसैले पनि “येशू नै प्रभु हुनुहुन्‍छ,” भन्‍दैन भनी म तिमीहरूलाई जनाउन चाहन्‍छु। पवित्र आत्‍माका वरदानहरू धेरै किसिमका छन् तर वरदान दिने पवित्र आत्‍मा एउटै हुनुहुन्‍छ। धेरै किसिमले सेवा चाहिँन्‍छ तर मालिकचाहिँ एउटै हुनुहुन्‍छ। धेरै किसिमका ईश्‍वरीय योग्‍यताहरू छन् तर हरेकलाई यी सब दिने परमेश्‍वरचाहिँ एउटै हुनुहुन्‍छ। सबैको भलाइ होस् भनेर हरेक मानिसलाई पवित्र आत्‍माको काम प्रकट हुन हरेकलाई वरदानहरू दिइएको छ। कसैलाई पवित्र आत्‍माले नै बुद्धिको वचन दिने वरदान दिनुहुन्‍छ र उही आत्‍माले कसैलाई ज्ञानको वचन दिने वरदान दिनुहुन्‍छ। उही पवित्र आत्‍माले कसैलाई विशेष विश्‍वास दिनुहुन्‍छ र कसैलाई बिरामी निको पार्ने वरदानहरू दिनुहुन्‍छ। कसैलाई चाहिँ अचम्‍म-अचम्‍मका काम गर्ने शक्ति दिनुहुन्‍छ। कसैलाई अगमवाणी बोल्‍ने (अर्थात् बुझ्‍ने भाषामा परमेश्‍वरको तर्फबाट बोल्‍ने) वरदान, कसैलाई आत्‍माहरू छुट्याउने वरदान अनि कसैलाई विभिन्‍न किसिमका अन्‍य भाषाहरूमा बोल्‍ने वरदान त कसैलाई ती भाषाहरूको अर्थ खोल्‍ने वरदान पवित्र आत्‍माले नै दिनुहुन्‍छ। यी सबै उही एउटै पवित्र आत्‍माका काम हुन्। पवित्र आत्‍माले आफ्‍नै इच्‍छाअनुसार सबैलाई यी बेग्‍ला-बेग्‍लै वरदानहरू दिनुहुन्‍छ।